ကလေးမြို့တွင် လမ်းပေါင်း ၂၆ လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘတ်ဂျက်တွင် ဆောင - Yangon Media Group
ကလေးမြို့တွင် လမ်းပေါင်း ၂၆ လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘတ်ဂျက်တွင် ဆောင
ကလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့၊ မြို့ အဆင့်အတန်းတိုးမြှင့်ရေးနှင့် မြို့တွင်းလမ်းများ၊ ကတ္တရာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြင့် အဆင့် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို (၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉)ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စည်ပင်သာယာဘတ်ဂျက် ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ၊ လမ်းပေါင်း (၂၆)လမ်းကို အဆင့် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ကလေးမြို့ မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှသိရသည်။
”ပြီးခဲ့တဲ့ ခြောက်လဘတ်ဂျက်တုန်းက မြို့တွင်းလမ်းပေါင်း (၂၄) လမ်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလာမယ့် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာလည်း မြို့တွင်းလမ်းပေါင်း (၂၆) လမ်းကို မြို့အင်္ဂါနှင့်အညီ အဆင့်မြှင့်တင်လုပ်ငန်းကို ကျွန်တော်တို့စည်ပင် သာယာဘတ်ဂျက်နဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းအကျယ် ၁၂ ပေသတ်မှတ်ထားပြီး လမ်းပိုမိုကျယ်ကျယ်ရချင်တယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထုထည့် ဝင်ငွေနှင့်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးပါ မယ်”ဟု အဆိုပါကော်မတီမှ လ/ထအင်ဂျင်နီယာ ဦးအောင်အောင်က နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ပြောသည်။
အဆင့်မြှင့်တင်မည့် လမ်း (၂၆)လမ်းအပြင် တာဟန်းရပ်ကွက်၊ ကြို့သုံးပင်ရပ်ကွက် မြို့သာရပ်ကွက်နှင့် မြို့လှရပ်ကွက်ရှိ လမ်းတံတားအများစုလည်း ပြု ပြင်ရန်ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ တံတားကတော့ လာမယ့် ဘတ်ဂျက်မှာ ၂၂ စင်းဆောက်မယ်။ ပေအရှည်မတူဘူး။ ရေပေး ဝေရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ဈေးမြေနေ ရာဝယ်ယူရေး၊ ဥပုသ်ချောင်းမြေ ထိန်းနံရံတည်ဆောက်ရေးစတဲ့ လုပ်ငန်းတွေပါဝင်တယ်။ လော လောဆယ်မှာ လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ ဘတ်ဂျက်ငွေကျပ်သန်း ၈၇ဝ ချထားပေးတယ်”ဟု စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် သောင်ရင်းမြစ်အတွင်း နှစ်ဖက်ပြည်သူများ ဆီမီးမျှောပွဲ စည်ကားစွာ ကျင်းပ၊
မကွေးတိုင်းအတွင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၌ စက်စွမ်းအားဖြင့် ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း လွှမ်းခြုံဆောင်?
ဘာစီလိုနာသို့ မယ်လ်ကွန်၏အပြောင်းအရွှေ့မှာ လက်စားချေမှုတစ်ခုဟု အေးဂျင့် ဆို
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း(MJA) အမှုဆောင်များ ပြန်လည်ရွေးချယ်
ဝင်ဘလေကွင်း မျက်နှာပြင်ထက် လေ့ကျင့်ရေးကွင်းက ပိုကောင်းကြောင်း အဲရစ်ဆင် ဆို
အခြေခံပြည်သူများ ဘဝတိုးတက်မှ မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်ပြီဟု ဆို၍ရကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဆို
ဗဟိုခံစစ်ပြဿနာအတွက် နည်းပြအမ်မရီ စိုးရိမ်မှုမရှိ
မုဒွန်းကျောက်သင်ပုန်း ကျောက်များကို ဈေးကွက်စမ်းသပ်မှု အဖြစ် ကြမ်းခင်းကြွေပြားများ ပြုလုပ?
အပူချိန်လွန်ကဲပြီး ရေဓာတ် ခန်းခြောက်မှုကြောင့် ကြယ်လိပ်များ သေဆုံးခဲ့၍ ထပ်မံသေဆုံးမှု မဖြစ်
ရှမ်း/မြောက်တိုက်ပွဲများကြောင့် လားရှိုးမြို့ပေါ်စစ်ရှောင်ပြည်သူ ၁၅၀ဝ ခန့်ရှိလာ၊ ခရီးသွားဧည့် ၁၀၁ ဦး ပိတ်မိနေသေး
Share 1083 Tweet 0